Waxaa qoray Josepf Tkach, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Fikradaha laga helayo Joseph Tkach
Miyaad ogtahay in Masiixiyiin badan ay ku nool yihiin maalin kasta oo aysan hubin in Ilaah weli jecel yahay iyaga? Waxay ka welwelsan yihiin in Ilaah iyaga diidi doono, oo waxaa kasii daran inuu isagu iyaga diiday. Waxaa laga yaabaa inaad tahay isla cabsidaada. Maxaad ugu malaynaysaa inay Masiixiyiintu walaac qabaan?
Jawaabtu waa si fudud inay iyagu naftooda daacad u yihiin. Waxay ogyihiin inay yihiin dambiilayaal. Waxay si xanuun leh uga warqabaan dhicitaankooda, khaladaadkooda, guuldarradooda - dembiyadooda. Waxaa la baray in jacaylka Ilaah iyo xitaa badbaadadiisa ay kuxirantahay sida wanaagsan ee ay Ilaahay u addeecaan.
Markaa waxay Ilaah u sheegaan mar labaad iyo sida ay uga xun yihiin waxayna cafis weydiisanayaan, iyagoo rajeynaya ...
Waa maxay shar ...